အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာလဲ America’s Got Talent ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့လူတွေတော်တော်များလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် မနှစ်တုန်းက season-12 မှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကလေးမလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Darci Lynne Farmer နဲ့ Angelica Hale တို့ကြောင့် မြန်မာမှာ America’s Got Talent ကပိုပြီးနေရာရသွားခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
A post shared by America’s Got Talent – AGT (@agt) on Apr 30, 2018 at 2:01pm PDT
ဒီမေလ ၂၉ရက်နေ့မှာတော့ America’s Got Talent ရဲ့ season-13 ကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Season-13 trailer အနေနဲ့ AGT ရဲ့ဒိုင်တွေဖြစ်တဲ့ Simon, Howie, Heidi နဲ့ Mel B တို့ အပါအဝင် Host ဖြစ်တဲ့ Tyra ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Cabin by the Creek ဆိုတဲ့ trailer ကို အရင်တစ်နေ့က officially released လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trailer ထဲမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ ကိုကို Simon ကလူဆိုး၊ဗီလိန်နေရာကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ (ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းကို နှစ်ပြားမတန်အောင်ချိုးဖဲ့ပြောတတ်ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းသာမက ပရိသတ်တွေရဲ့ သဲသဲလှုပ်ချစ်ခံရတာ Simon တစ်ယောက်သာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အက်မင်လဲ Uncle Simon ဆိုချစ်ချဉ်ပဲ?)
America’s Got Talent ကိုစောင့်ကြည့်နေရပေမယ့် မနှစ်ကစပြီး Nick တစ်ယောက်မရှိတော့တဲ့နောက်တော့ ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်နေသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။ စကြည့်ခဲ့မိတဲ့ အချိန်ကစပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့အတူ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျမှန်သမျှကိုလိုက်ပြီး အားပေးတတ်တဲ့သူ၊ တကယ့်ကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေပေးနိုင်တဲ့သူ၊ သူ့ကြောင့်ပဲ အရင်တုန်းက AGT ပွဲတွေဟာ ကြည့်ရတာပိုပြီးအသက်ဝင်နေခဲ့တာပါ။ မနှစ်တုန်းက သူ AGT ကိုထားခဲ့တုန်းကဆို ဆက်ပြီးတောင်မကြည့်ချင်တော့ဘူးလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြသူတွေလဲ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ တနေ့နေ့တော့ Nick တစ်ယောက် ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့မျှော်နေမိပါတယ်။ Tyra လဲ သူ့ဟာနဲ့သူကောင်းနေပေမယ့် AGT ဆိုတာနဲ့ Nick ဟာ meant to be တွေဖြစ်နေခဲ့တာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်လဲ Nick မပါတော့တဲ့ ဟာတာတာ AGT ကို ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရအုန်းမှာပေ့ါလေ……….
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပိုပြီးကောင်းလာတဲ့ အစွမ်းပြမှုတွေမှာ အဆိုတွေချည်းမဟုတ်ပဲ မနှစ်ကလို ထူးထူးဆန်းဆန်းအစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူတွေပါပြီး တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေအောင်မြင်နိုင်ကြမလားဆိုတာကို ဒီမေလ ၂၉ရက်နေ့မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
PREVIOUS POST Previous post: Zayn နဲ့ Gigi ပြန်တွဲနေကြပြီလား???
NEXT POST Next post: Big bag Hardcore fan တွေရဲ့ အလန်းစား fan art တွေ